‘वार्षिक रुपमा दुई सय जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न वीरमा गाह्रो छैन’ | Nepali Health
२०७८ असार ३० गते १६:३३ मा प्रकाशित
-डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, मिर्गौला प्रत्यारोपणविज्ञ
एकिन तथ्यांक त छैन् तर हामीकहाँ वार्षिक३ हजार बढीको मिर्गौला फेल हुने अनुमान छ । प्रत्यारोपको तथ्यांक केलाउँदा अधिकतम रुपमा वार्षिक रुपमा अढाई सयको हाराहारीमा भएको पाइएको छ । ६ हजार जना जति अहिले डायलासिसमा रहेको भन्ने देखिन्छ ।
मैले आज यो किन भन्दैछु भने वार्षिक रुपमा थपिने मिर्गौला ‘फेलियर’मध्ये १० प्रतिशतको पनि प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन् । पछिल्लो बर्षमा त झन् कोरोना महामारी भनेर प्रत्यारोपणको गति झनै सुस्त बनेको छ ।
डायलासिस जस्तै राज्यले मिर्गौला प्रत्यारोपण निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यै निशुल्क प्रत्यारोपण गराउन चाहेको व्यक्तिले पाएको छैन् । किन पाएको छैन् ? धेरै ठाँउमा प्रत्यारोपण नै भएको छैन् ।
अझ् भनौ, नि:शुल्क प्रत्यारोपण हुने सरकारी अस्पतालमा यो कार्यक्रम ओझेल परे जस्तो देखिन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन र जीवन सक्रिय बनाउन डायलासिस भन्दा प्रत्यारोपणलाई प्राथमिकता दिनै पर्दछ ।
यसकारण नेपाल फर्किएँ
तेह्र बर्ष अघिको कुरा, बेलायतको न्युक्यासलस्थित फ्रिम्यान हस्पिटलमा मिर्गौला, कलेजो र प्याङ्क्रियाजको प्रत्यारोपणको काम गरिरहँदा नेपालमै गएर यस्तै गरी नेपालीको सेवा गर्ने मौका कहिले जुट्छ होला भनेर सोच्ने गर्दथेँ । नभन्दै सोँचे जस्तै भैदियो । सोही बर्ष अर्थात सन् २००८ को नोभेम्बरमा म नेपाल फर्किएँ ।
आएकै महिना देखि वीर अस्पतालमा आवद्ध भएँ । वीरमा डा विजय शर्मा, रजनी हाडा लगायतका मेरा सिनियरहरुले अङ्ग प्रत्यारोपण, विशेषगरी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रयास गरिराख्नु भएको थियो ।
म आईसकेपछि त्यस कार्यले तिब्रता पायो ।
सन् २००८ को १२ डिसेम्बरमा वीर अस्पतालमा हामीले मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण गर्‍यौं। नेपाल आएको छोटो समयमा अङ्ग प्रत्यारोपण कार्यमा महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पाएकोमा त्यसबेला म निकै गौरवान्वित थिएँ । करीब चार बर्ष वीर अस्पतालमा बित्यो ।
प्रत्यारोपण केन्द्रमा यसरी पुगें
अंग प्रत्यारोपण खासगरी मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सफलता देखिन थालेपछि सरकारले छुट्टै अंग प्रत्यारोपण सम्वन्धी अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो र भक्तपुरमा मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको नाममा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।
सन् २०१२ को सुरु तिर सरकारले मलाई त्यस केन्द्रको संस्थापक निर्देशकको रुपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो ।
म त्यहाँ पुगेको ६ महिनामा अस्पताल सेटअप गरी मिर्गौला बिरामीका लागि डायलासिस सेवा शुरु गरेँ । करीब ९ महिना पछि त प्रत्यारोपण नै शुरु भयो ।
त्यसयता मैले सो संस्थामा ६९५ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरें ।
त्यसअघि वीर अस्पतालमा ९९ जना र अन्य अस्पतालमा ५ गरी कुल ७९९ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेछु । काजफिर्ता हुनु अघि नै त्यस केन्द्रको आफ्नै कर्मचारी दरबन्दी बनाउन सफल भएँ ।
छ वर्ष बेलायत बिताएर पनि स्वदेश फर्किई यति धेरैको ज्यान बचाउन पाउँदा गर्वको अनुभुति नहुने कुरै भएन ।
वीरमा १४ महिना देखि जिम्मेवारी विहीन
भक्तपुरमा स्थापना गरिएको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र (शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र) नयाँ थियो । कुनै दरबन्दी थिएन । त्यसैले मलाई त्यहाँको नेतृत्व गर्न वीरबाट काजमा लगिएको थियो । त्यहाँ गएर मैले आठ वर्ष काम गरें । यो अवधीमा अस्पतालको स्थापना देखि सबैभन्दा बढी मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण हुने नमूना अस्पताल बनाएँ ।
तर, चौध महिना अघि सरकारले मेरो काज फिर्ता गर्‍यो । म पुनस् वीर फर्किएँ । तर त्यस यताको १४ महिनामा मलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । मेरो काम हाजिर गर्ने र फर्किने भएको छ ।
प्रत्यारोपण त के मलाई यो अवधीमा ओपिडीमा पनि काम गर्नका लागि जिम्मेवारी दिईएन । किन दिईएन ? थाहा भएन ।
यो अवधीमा मलाई ओपिडी हेर्न दिइएको र १० जना विरामी हेर्न पाएको भए पनि ४२०० बढी विरामीले सेवा पाउने थिए ।
प्रत्यारोपण नपाएर बिरामीको ज्यान गएको छ । अहिले कोरोनाका नाममा सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छैन् । तर कतिपय निजी अस्पतालहरुमा धमाधम प्रत्यारोपण भइरहेको छ । यसले प्रत्यारोपण पर्खेर बसेका आम सर्वसाधारणलाई अफ्टेरो पारेको छ ।
यो सामान्य लाग्ने तर सम्वेदनशील विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
वीर अस्पतालमा बार्षिक २ सय भन्दा बढीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ
वीर अस्पताल नेपालकै सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक अस्पताल हो । अहिले हामीले अत्याधुनिक सर्जिकल भवन पाएका छौँ । स्रोत साधानको हिसावले पनि वीर अस्पताल सबैभन्दा उपयुक्त छ । अहिले त्यहाँ प्रत्यारोपण सेवा अवरुद्ध छ तर त्यो सेवा फर्काउनु पर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले ‘डेडिकेटेड’ प्रत्यारोपण विभाग बनाउनु पर्छ । विभागलाई चाहिने जनशक्ति र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।
मैले के दावी गर्छु भने वीर अस्पतालमा सजिलोसंग बार्षिक २ सय भन्दा बढीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमणकै बेलामा पनि बार्षिक कम्तिमा एक सयको प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।
बर्षको दुई सय प्रत्यारोपण गर्नु वीर अस्पतालको लागि ठूलो कुरा होइन । तर, त्यसको लागि प्रत्यारोपण विभाग नै तयार गर्नु पर्छ ।
हामीहरु काम गर्न तयार छौँ जनशक्तिको अभाव छैन । वीर अस्पतालमा यतिवेला आवश्यक मात्रामा बजेटको व्यवस्था पनि छ । त्यसैले पनि यो कार्य छिटो नै सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रत्यारोपण अघि बढाउन अहिले त्यहाँ अप्रेसन थिएटर छैन्, ठाँउ खालि छैन भनिएको छ, यो व्यवस्थापकीय कुरा भयो । तर, मैले काज फिर्ता गरेर आएपछि कोभिड नभएको भए २०० जनाको र कोभिडको हुँदाको समयमा पनि १०० जनाको त गर्दथें । किनभने प्रत्यारोपण भनेको छुट्टै नै ‘डेडिकेटेड’ कार्यक्रम हो ।
कोभिडको विरामीसंग मिसाउन पाईदैन र मिल्दैन ।
कोभिडकै बेलामा पनि संसारमै प्रत्यारोपण भइरहेको छ । यहाँ नहुने कुरै थिएन ।
अब पनि ढिलाई गर्न हुन्न, गर्न सकिन्छ । नेपालीको ज्यान बचाउन पर्छ ।
ब्रेन डेथको कुरा
अंग प्रत्यारोपण भन्ने वित्तिकै लाइभ डोनरको मात्रै कुरा होइन । कानूनले हामीलाई मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ)भएकाहरुको अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ब्रेन डेथबाट प्रत्यारोपण अभियानलाई अघि बढाउने ठूलो सम्भावना छ । किनभने हामीले भक्तपुर केन्द्रमै प्रमाणित गरेर देखाएका छौँ । हामीले छ जनाको मिर्गौला सफलताका साथ प्रत्याोपण गरेका छौँ । उहाँहरु अहिले पनि जिउँदै र स्वस्थ हुनुहुन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने ब्रेन डेथ हुने सबैभन्दा बढी ट्रमा सेन्टरमा हुन्छ । यहाँको ट्रमा सेन्टर वीर अस्पतालसंग जोडिएको छ । त्यसैले वीरले प्रत्यारोपण कार्यलाई अघि बढाउने हो भने ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण गर्न सहज हुन्थ्यो । यो वीरका लागि सुनौलो अवसर पनि हो । ब्रेन डेथबाट पनि हामीले बर्षमा अरु एक दुई सय प्रत्यारोपण गर्न सक्छौँ ।
सुरुका बर्षमा त्यो पनि ठूलो संख्या हो । पछि हामीले ब्रेन डेथबाट मात्रै अंग लिने र स्वस्थ व्यक्तिबाट अंग नलिने पनि गर्न सक्छौँ । त्यो योनजा गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा मात्रै होइन प्रदेश स्तरको अस्पतालमा पनि पनि यो सेवा सुरु गर्न सकिन्छ ।
हामीले भक्तपुरमा बार्षिक झण्डै दुई सय जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दथ्यौँ । त्रिवि शिक्षणमा ५०–६० जनाको प्रत्यारोपण हुन्थ्यो । तर अहिले दुबै ठाँउमा गरेर २० –३० जनामा घटेको सुनियो । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । मैले माथिनै उल्लेख गरें नी मैले पछिल्लो एक बर्ष जिम्मेवारी पाएको भए यहि अवस्थामा पनि एक सय बढीको प्रत्यारोपण गर्दथें ।
मेरो अर्को पनि सुझाव छ प्रत्यारोपण केन्द्रको हव अब वीर अस्पताललाई बनाउनु पर्छ । किनकी त्यहाँ नजिकै ट्रमा सेन्टर छ । त्यहाँ प्रत्यारोपण मात्रै होइन तालिम केन्द्रको रुपमा ट्रान्सप्लान्ट फेलोसिप कार्यक्रम चलाईदियो भने त्यहाँबाट प्रदेशमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ र प्रदेशमा पनि सेवा पुग्न सक्छ । यसो गर्दा बर्षमा अरबौँ रकम विदेशीनबाट जोगिन्छ । कम्तीमा पनि डेढ दुई सय जनाको ज्यान बाच्छ । त्यसैले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
तर, प्रत्यारोपण केन्द्रलाई तामिल दिने संस्थाको हिसावले शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।